» खै तपाईंहरुको मेयर रेणु ? यहाँ आउनु भएन त ? सायद पिकनिक खान जानुभयो होला ! -केपि ओलि ( भिडियो सहित हेर्नुहोस) खै तपाईंहरुको मेयर रेणु ? यहाँ आउनु भएन त ? सायद पिकनिक खान जानुभयो होला ! -केपि ओलि ( भिडियो सहित हेर्नुहोस) – हाम्रो खबर
खै तपाईंहरुको मेयर रेणु ? यहाँ आउनु भएन त ? सायद पिकनिक खान जानुभयो होला ! -केपि ओलि ( भिडियो सहित हेर्नुहोस)